Caadiga ah ee ku saabsan Daroogada • Dawooyinka Inc.eu
Bogga ugu weyn Daroogooyinka Caadi ahaan ku saabsan daroogada
maqaal by Ties Inc. November 17 2021
Ololaha cusub ee todobaadkan waa “sida caadiga ah ee ku saabsan daroogadabilaabay. Ololahan ayaa lagama maarmaan u ah sababta fudud ee ah in siyaasadda daroogada ee hadda jirta ee dawladda Nederlaan aysan shaqaynayn. Siyaasadda daroogada ayaa noqotay mid aad u qallafsan oo caburinaysa sannadihii u dambeeyay. Maxaase habkani noo keenay? Kharash badan oo ku baxa booliiska iyo garsoorka, halka daroogooyinka ay ka jaban yihiin oo ay fududahay in la helo. Ma jiro wax war ah oo dhib ah, qashinka daroogada waa la daadiyaa, dambiyaduna waa sii kordhayaan.
Ololuhu wuxuu ugu baaqayaa qof walba inuu si caadi ah uga dhaqmo daroogada. Haddii aad daroogooyinka u tixgeliso alaab caadi ah, waxaad sidoo kale dejin kartaa xeerar caadi ah. Mamnuuciddu waxay horseedaysaa ganacsiga sharci-darrada ah ee waddooyinka iyo daroogada xun. Adiga oo nidaaminaya halkii aad ka mamnuuci lahayd daroogada, waxaad maareyn kartaa soo saarista iyo iibinta daawooyinka, iyadoo leh xeerar ku saabsan tayada, badbaadada iyo caafimaadka. Marka lagu daro ka-hortagga la beegsanayo iyo macluumaadka daacadda ah ee ku saabsan saameynta daawooyinka, tani waxay xaqiijinaysaa siyaasadda wanaagsan ee daroogada.
La dagaallanka daroogada ayaa Nederland ku kacda 4,5 bilyan oo Yuuro sannadkii. Oo waxay helaysaa oo kaliya in ka badan. Dayrtan, golaha wasiiradu waxay go'aansadeen in ay sameeyaan boqollaal kale malaayiin dheeraad ah in lagu bixiyo "dagaalka daroogada". Durba in ka badan kala badh awoodda booliiska iyo garsoorka ayaa lagu kharash gareeyaa daroogada. Saddex meelood saddex meelood oo ka mid ah baaritaannada dembiyada waaweyn waxay diiradda saaraan daroogada. Waa xaaqin iyadoo qasabadu furan tahay.
Bulsho aan maandooriye lahayn waa dhalanteed. Waxaa la joogaa waqtigii ay siyaasiyiintu qaadi lahaayeen hab kale. Adiga oo nidaaminaya mukhaadaraadka, waxaad ka diidaysaa dambiilayaasha qaabka dakhligooda. Jawaabta bilaysku waa had iyo jeer in tani aysan ka dhigi doonin dembiilayaasha, laakiin waxay ku mashquuli doonaan arrimo kale oo mugdi ah. Taasi waa laga yaabaa, laakiin taas uma arko sabab aan loo sharciyeyn daroogada. Maxaa yeelay 1,7 milyan oo qof oo isticmaala daroogada sanad walba maxay u mudan waayeen ilaalin? Ma aha inay ku tiirsanaadaan dambiilayaasha. Taasi waa doorasho siyaasadeed.
Halkii lagala dagaallami lahaa maandooriyaha, waxa kale oo suurtogal ah in la doorto dhaqan gelinta adag ee suuq si wanaagsan loo maamulay. Macaamiishu waxay markaa si sharci ah uga iibsan karaan daroogooyinka jawi ammaan ah, oo laga helo ilo la isku halleyn karo. Aan wadada ku jirin qof iibiya. Iyo sababta oo ah alaabada sharciga ah waa la canshuuri karaa, sharciyeynta xitaa waxay soo saartaa lacag. Sidan ayaa warbixin wanaagsan laga siin karaa waxyeelada iyo halista daroogada waxaana fiiro gaar ah loo yeelan karaa ka hortagga. Sidan, lacagta cashuurtayadu waxay ku baxdaa si caqli-gal ah, siyaasadduna waxay ka qaybqaadataa bulsho caafimaad qabta oo badbaado leh.
Haddii aad sidoo kale u malaynayso in aan caadi ka noqono daroogada iyo in la joogo waqtigii siyaasad daroogo kale, nagu soo biir oo ku deeqo qadar yar oo ololaha. Tani waa fursada loogu diri karo fariinta siyaasiyiinta Hague. Calaamad muujinaysa in arrimuhu si ka duwan loo samayn karo oo ay tahay in la sameeyo. Wadajir ayaannu xoog u nahay. Markasta oo ay dadku isku soo baxaan ololahan, waxaa sii badanaya dhawaaqa digniinta siyaasiyiinta.
Sidaa darteed waxaan kaa codsanayaa inaad u fiirsato ololaha, la wadaagto fariinta oo aad ku sii faafiso shabakadaada. On the website waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ololaha. Waa kan sidoo kale waxaad samayn karto si aad u taageerto ololaha.
dembidaroogadasiyaasadda daroogadaKHLAsharci-dejintaNederlandxeerardagaalka daroogadasharciga
Kobaca Mawduucyada CBD: Waa maxay sababta ay waxtar u leeyihiin?
Waa maxay Sceletium Tortuosum, sidoo kale loo yaqaan kanna...
Oregon wuxuu leeyahay 1 milyan oo rodol oo xashiish ah oo aan la iibin:…